Sawiro: Ciidamada Danab oo burburiyey Gaari siday waxyaabaha qarxa - Caasimada... - Wararka Maanta
Jilib Marka (Wararka Maanta) – Ciidamada Kumaandooska Danab ee Xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab ka fuliyey deegaanka Jilib Marka oo ka tirsan Gobolka Shabeelada Hoose.
Taliska Ciidamada Xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalkaas lagu burburiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu diyaarinayey saldhig ay halkaas ku lahaayeen Kooxda Al-Shabaab.
Gaariga la burburiyey ayaa waxaa lagu sheegay noociisa inuu ahaa Saruf, waxayna wararka sheegayaan in la doonayo in lasoo geliyo Magaalada Muqdisho inkastoo aan la ogeyn bartilmaameedkiisa saxda ah.
Wararka Maanta : Wasiirro Kormeeray Dhismaha Jidka Isku Xidhaya Widh-widh iyo Laascaanood
Howlgalkaan ayaa wuxuu dhacay aroortii hore ee saaka, waxaana ujeedka howlgalkaan lagu sheegay inuu ahaa burburinta fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Jilib Marka.
Taliska Ciidamada ayaa xusay inay ciidamada u suurtagashay inay gacanta ku dhigaan fariisimo cusub oo ay horey ugu sugneyd kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin sheegashada Saraakiisha ciidamada Dowladda iyo howlgalkii laga sameeyey Jilib Marka.
Wararka Maanta : Madaxweyne Erdogan: Biden gacmaha ayuu dhiig ku sitaa - Caasimada Online
Wararka Maanta : Warbixin: Ololihii Doorashadda Jabuuti Oo La Soo Gebagabeeyay
Wararka Maanta : Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaad 2 sano kadib magacaabay golihiisa wasiiradda